VIDEO: Radiom-Bahoaka Any Ginea-Bisao Ho an’ny Vahoaka Fa Tsy Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2013 8:14 GMT
Misy zavatra tsara ataon'ny radiom-bahoaka any Ginea-Bisao ankoatra ny fandefasana hirahira amin'ny onjam-peo, araka ny nolazainà fanadihadiana iray vao haingana.
Araka ny nambaran'ny “Voice of the Population” na “Feon'ny Vahoaka”, fanadihadiana maharitra 26mn, nalaina sary tamin'ny 2012, ary navoaka tamin'ny Febroary 2013 dia namonjy aina maro io Radio io nandritra ny fihanaky ny valan'aretina Kolerà, niady tamin'ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna, ary nanosika ny fanavahana ara-taovam-pananahana, tamin'ny fampiraisana ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana manodidina ny harenan'ny mozika any Ginea-bisao.
Ilay fanadihadiana Holande, tantanan'ilay mpanatontosa sarimihetsika Polone Andrzej Kowalski ary nosoratan'i Lucia van den Bergh, dia mikendry ny hampiseho ny “làlana nodiavin'ilay radiom-bahoaka any Ginea-Bisao, ny olana nosedrainy nandritra ny fivelaran'izy ireo, ny fandraisan'ireo vondrom-piarahamonina azy ireo ary ny foto-kevitra hijoroan'izy ireo”.
Hita ao amin'ny YouTube amin'ny teny Portioge sy Frantsay ny fanadihadiana manontolo:
Niresadresahana avokoa ireo mpitondra avy amin'ny sasany amin'ireo radio 30 hita ao amin'ny firenena, eny fa na dia ny hatrany amin'ny faritra mitoka-monina indrindra aza. Araka ny filazan'ilay fanadihadiana, ireo no haino aman-jery henoin'ny olona indrindra any Ginea-Bisao amin'izao fotoana izao, ary izany dia vokatra amin'ny ampahany noho ny tosika avy amin'i Carlos Schwarz, mpitantana ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Acção para o Desenvolvimento (Hetsika ho an'ny Fampandrosoana).
Dika sarin'ilay fanadihadiana ” Ny Feon'ny Vahoaka”
Nambaran'i Schwarz tao anatin'ilay sarimihetsika dia “zava-tontosa, herim-bahoaka ry zareo” mantsy ireo radionà vondrom-piarahamonina :
Mahazo ny fanohanana sy ny fankatoavana avy amin'ny vahoaka ireo radio ireo. Ka izany no mahatonga ny fisalasalan'ny governemanta hanohitra na hampangina azy ireo. Ankoatra izay, nahay nitondra tena tamim-pahamendrehana, fahaiza-miasa, ary fahamarinana ara-politika izy ireo, mba tsy hisy ho afaka hiteny fa miasa ho anà antoko [politika] na miaro ny tombontsoa ara-toekarena izy. Raha ny marina ny radio no hany solontena maneho izay mampiasa loha ny olona any an-toerana
Izany no tena herin'ireto radio ireto ary noho izany – na dia tsy mahazo fanohanana amin'ny governemanta aza- tsy hiady amin'izy ireo ry zareo. Ny tsy fiankinan-doha amin'ny politika sy ny tombontsoa ara-toekarena no vato fehizoron'ny radiom-bahoakanay. Fa amin'ny andro ialàny amin'izany foto-kevitra izany no hahafaty azy.
Mampiseho ny asa lehiben'ny radiom-bahoaka amin'ny fanandratana ny kolontsaina sy ny herin'ny demokrasia ary ny maha-olom-pirenena ihany koa ny “Feon'ny Vahoaka”. Fa indraindray misy mpanentana miditra lalina ihany koa anefa, amin'ny fanaovana tatitra na asa mikasika ny olana ara-tsosialy, ny tontolo iainana na ny fahasalamam-bahoaka.
Tahaka izany ny Rádio Voz Quelelé (Radio Feon'i Quelelé ), izay hatramin'ny niandohany tamin'ny 1994 dia nanaitra ny mponina “tamin'ny fitenin'ny foko maro monina ao amin'ny faritr'i [Quelelé]” momba ny fepetra raisina mikasika ny fihanahan'ny valan'aretina kolerà. Hany ka ny tao amin'ny faritra manodidina azy no tsy dia nahitàna io aretina io firy tany Bisao, enina ihany no fantatra fa marary”, araka ny fanazavan'ny bilaogin'ilay radio :
Tsy isalasalana fa ny ady amin'ny kolerà no fahombiazana lehibe ho an'ny Radio Feon'i Quelele, hetsika izay mifototra amin-javatra roa : a) fiaraha-mientan'ny mponina hanadio ny faritra, fanalàna ny fako, fanadiovana ny lava-drano,fandefasana ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana (nanana fiara vonona mandrakariva tamin'izany ny Hetsika ho an'ny Fampandrosoana), fanadiovana ny marary ao an-trano, ny famangiana isanandro ataon'ireo mpikambana ao amin'ny komity ny trano sao dia misy mararin'ny kolerà, ary b) Fanentanana ny vahoaka amin'ny maha-zava-dehibe ny fanadiovana ny toeram-ponenana, fampitomboana ny fanaraha-maso ny ankizy, manazava ny fomba fahatongavan'ny aretina sy ny fomba fiparitahany.
“Mafy izany ho an'ny ankizivavy”, hoy Elisa Gomes ao amin'ny Feon'i Quelelé tao amin'ilay fanadihadiana, raha mijery ny asa ao an-tokatrano sy eo an'ivon'ny fianakaviana izay tsy mamela ny vehivavy Gineana handray anjara amin'ny radiom-bahoaka. Nefa na dia izany aza, dia niezaka ny hamporisika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy ny radiom-bahoaka, toy ny famoronana ny vondrona ” vehivavy mpanentana amin'ny radio ao anatin'ny tambajotra Nasionalin'ny Radiom-bahoaka (Rede Nacional das Rádios Comunitárias, RENARC).
Miaraka amin'ny lohateny hoe “ Radiom-bahoaka : fitaovana iray enti-miady amin'ny fahantrana sy ny fanavakavahana ara-tsosialy any Ginea-Bisao” (pdf, 2010), ny osoratan'i Adão Nhaga, mpanentana tao aminà radio fahiny ary mpandrindra ireo fandaharana maro manerana ny firenena, dia miantso ny vehivavy mba ‘ handray anjara mavitrika amin'ny fanodinana avy ao anatiny ireo radiom-bahoaka”:
Tsy maintsy ampiasain’ny vehivavy ny radiom-bahoaka ho toy ny fitaovam_bahoaka, fampianarana , fahalalahana, fandraisana anjara, fifaneraserana, maneho ny fahasamihafana sy ny haren’ireo fikambanam-behivavy samy hafa, ny hamaroan’ny safidy sy ny fampiharana ny fampandrosoana ; ny kolontsaina natokana ho an’ny vehivavy avy amin’ny foko samy hafa toy ny singa fototry ny maha-olom-pirenena Bisao-gineana, fa tsy ny fahamboniana na fahambanian’ny sasany raha mitaha amin’ny hafa. Izay no antony mahatonga ny fanamby hanentana ny fandraisam-pitenenan’ny vehivavy mba hisian’ny demokrasia eo amin’ny fiaraha-monina.
Araka ny lahatsoratra navoakan'ny AngolaPress, nolazain'i Lucia van den Bergh, mpanoratra ny fanadihadiana fa hatramin'ilay fanonganam-panjakana ara-miaramila ny Aprily 2012 niafara tamin'ny fisamborana ny filoham-pirenena sy ny mpilatsaka hofidina ho filoha, dia nitombo ny “fanivanan-tena” atao any anatin'ireo fandaharana any amin'ireo radiom-bahoaka :
Namafisiny “fa tsy nampiala azy ireo izany ary dia mbola mampita hafatra momba izay zava-mitranga ihany izy”, ary nampiany hoe ” ny vahoaka eo an-toerana, izay mazàna no tsy manana na inona na inona, no manohana amin'ny fanolorana vatoaratra”.
Na eo aza izany rehetra izany, hazavain'ilay fanadihadiana fa tsy “resaka fanonganam-panjakana fotsiny ny any Ginea-Bisao, fa mbola misy vahoaka sy hevitra tsara any”, araka ny fanamafisan'ny tale Andrzej Kowalski.